Aadaa – Page 2 – Welcome to bilisummaa
______________________ -Najiib Zannuun irraa Tattaaffiin walliftoonni Oromoo gama guddina afaanii,aartii fi qabsoo teenyaaf godhanii fii gochaaa jiran himamtee hin dhumtu. Dhugaa ummataa walleen alalaasuun dhibdee …
http://www.dglobe.com/news/education/4232841-wms-students-lend-hands-oromo-awareness-project WORTHINGTON — Worthington Middle School students came together Friday afternoon to make bracelets as a way to support the Oromo Awareness Project. The Oromo …
Deemee mana pirofeesarii Argadhee yaadota gaggaarii!! Muxannoon baayyee gabbataa Namas gorsuu ni jaallataa Sabnis isa abdataa!! Kan seenaa hojjatee Qorannoo hedduu raawwatee …
Baarentuu Gadaa Iarraa/// Ummanni Oromoo aadaa, seenaa, afaan fi duudhaa isaa dhiigaa fi dafqa isaatiin tikfataa as gahe. Funduraafis dhiiguumaa fi dafqa isaatiin tikfataa jiraata. …
#Saphaloo / Abdulbasit Kediriin Wellisaa Abraahim Baadiyyaa Eenyu? “Yaa waaqayyoo nu gargaari, Gabrummaan affeelamne Oromoonii, Takka faraqaan nu haa geessu bilisummaani…” —— “Yaa Oromoo gantuu …